192.168.1.254 Login Admin | Router Admin Login & Dib u dejinta erayga sirta ah
192.168.1.254 waa Cinwaanka IP u gaar ah loo isticmaalo sida cinwaanka IP router Default badan oo router iyo Moodeemka. 192.168.1.254 login u oggolaanayaa maamulku inuu marin u helo, habeeyaan oo cusbooneysii dejimaha. IP-ga 192.168.1.254 loo qoondeeyay in lagu isticmaalo shabakadaha gaarka loo leeyahay.
192.168.1.254 Cinwaanka IP Admin Login wuxuu kuu oggolaanayaa inaad gasho qalabkaaga 'ADSL router'. Haddii adeegsigu u baahan yahay inuu galo router-ka adiga oo aan isticmaalin silig, lambarka cinwaanka IP-ga 192.168.1.254 waxay suurtogal ka dhigaysaa.
192.168.1.254 waa IP-ga gaarka loo leeyahay ee ishaarooyinka, modem, iyo Baalalyada waxayna si fudud uga dhigan tahay in aaladda ku jirta shabakaddan gaarka loo leeyahay ama IP-ga toos looga heli karo internetka iyadoo la adeegsanayo IP-da gaarka loo leeyahay., laakiin aalad kasta oo ku xirnaata shabakadda maxalliga ah waxay kuxiran kartaa aalad kale oo waliba sidoo kale shabakaddaas.
Waxaa jira qaar ka mid ah router-ka iyo noocyada modemka oo ay ku jiraan Linksys Routers iyo Moodooyinka, Westell DSL Moodeemka, Moodooyinka Alcatel, 3Com Routers, iyo Moodooyinka, Billion Router iyo Moodooyin iyo wadatayaal kale oo badan oo caan ah kuwaas oo badanaa adeegsada 192.168.1.254 sida cinwaanka IP-ga ee caadiga ah ee router-ka.
Gal 192.168.1.254 IP Address
Adeegsade si fudud ayaa u dhammaystiri kara 192.168.1.254 Tallaabo gal gal adigoo raacaya tillaabooyinka soo socda.
Tallaabo: 1- Kuxiro PC-gaaga ama aaladda kumbuyuutarka router-ka adigoo isticmaalaya fiilada ethernet-ka ama Wi-Fi.
Tallaabo: 2- Fur mid ka mid ah bog furayaasha kombuyutarkaaga oo geli nooca URL http://192.168.l.254 biraawsarkaaga.
Tallaabo: 3- Gali magaca sirta ah ee adeegsada iyo lambarka sirta ah waxaadna ku jiri doontaa cinwaankaaga IP-ga router 192.168.1.254.
Inta badan router-ka leh cinwaanka IP-ga ee caadiga ah 192.168.1.254 isticmaal magaca isticmaale iyo eray sir ah “admin“. Xitaa haddii aad ilowday isticmaale-lambarkaaga iyo eraygaaga sirta ah markaa waad caawin kartaa 192.168.1.254 Soo gal oo dib u bilaabi kara routerka.
Dib u dejinta Router
Kawaran hadaan ilaaway passwordkayga?
Tallaabada-1: Dami ama Dami Routerka aad isticmaaleyso.
Tallaabada-2: Riix oo ku hay batoonka dib-u-dejinta dusha gadaal 5 si ay u 10 ama 15 ilbidhiqsiyo leh pin kore oo fiiqan ama leh kombuyuutar ama irbad isla mar ahaantaana ku soo celi ama shid Router.
Tallaabo- 3: Hadda, sii daa batoonka dib u dejinta oo sug qalabka dib u bilawga.
Tallaabo 4: Hadda, waxaad awood u yeelan doontaa inaad ku xirto kumbuyuutarka aaladda kumbuyuutarkaaga qalabka routerka adiga oo adeegsanaya fiilada shabakadda Ethernet ama adoo adeegsanaya isku xirka Wi-Fi.
Tallaabo 5: Ku xidh shabakada oo routerkaagu dib ayaa loo dejiyay.
Waxaan rajeynayaa in qoraalkani kaa caawiyay inaad dhammaystirto 192.168.1.254 login talaabo oo buuxi 192.168.1.254 Login Admin tallaabo. Haddii aad wali qabtid wax dhibaatooyin ah ama dhibaatooyin ah markaa ka faallo hoose oo nala soo socodsii. Wixii intaa ka badan 192.168.1.254 IP Address, booqo websaydhka rasmiga ah hadda.
192.168.1.254 badalida Lambarka sirta ah192.168.1.254 Dib u dejinta erayga sirta ahhttps://192.168.1.254 login
Post Previous:Linksys router Login & Linksys router-haggaajin Guide